[Sidee loo] Ku rakibo loox on Debian Wheezy | Laga soo bilaabo Linux
[Sidee loo] Ku rakibo loox on Debian Wheezy
Kani waa soo gal gaaban laakiin aniga waxay ila muuqatay, inay mudan tahay in lala wadaago, maxaa yeelay aniga qudhaydu markii aan isticmaali jiray Debian Waxay ahayd inaan ikhtiraaco PPA kala duwan si aan u rakibo baakado loo heli karo oo keliya Ubuntu.
Dhamaan Docks-ka aan isku dayay, midka aan ugu jeclaa ayaa ahaa Qorshe, kaas oo loo abuuray mashruuca Dugsiga hoose laga bilaabo Docky. Iyo sidaad ogtahay eOS ku saleysan yahay Ubuntu.
Hagaag, hadaan rabno inaan rakibno Qorshe en debian hiinraag, waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan ku darnaa faylka /etc/apt/sources.list Khadadka soo socda:
Kadib waxaan cusbooneysiinaa oo rakibnaa Plank
Waana taas. Haddii aan dooneyno inaan u qaabeyno, ku dar mawduucyo iyo waxyaabo kale oo badan, halkan waxaad ku leedahay sida loo sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » [Sidee loo] Ku rakibo loox on Debian Wheezy
Ma wax la mid ah baa la rakibi karaa iyada oo aan lagu darin bakhaarro dheeri ah? Laptop-kayga waxaan ku haystaa aasaasi waana jeclahay wax badan, laakiin waan xiiseeyaa waxaanan doonayaa inaan u boodo debian (oo qof walba dhaho waa "kan ugu fiican" uguna adag). Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan helo jawi lamid ah pantheon (nadiif ah oo qurux badan), Ma jecli gnome oo kde iyo xfce ma qancin karaan, lxde-na waxaan u arkaa inay aad u spartan tahay. Ma waxaa jira xulasho kale oo dheeri ah ama codsigeygu ma ku adag yahay debian oo ma waxaan u baahanahay inaan beddelo distro?
Ku jawaab Graff
Gnome waa tan ugu eg maadaama Pantheon uu ku saleysan yahay
Ma aqaano in Debian-kan qorfe ee sidoo kale ku saleysan GNOME iyo sidoo kale, sidoo kale waa wax fiican
Waxaan isticmaalaa XFCE waanan ubadali karaa sidaan rabo, xitaa waad siinkartaa muuqaalka Pantheon-la mid ah, kaliya waa inaad ogaataa sida wax looga badalo, tusaale ahaan waxaad rakibtay Slingshot oo horeyba waxaad u laheyd isla barnaamij bilaw ah, waad rakibtay Plank waxaadna leedahay meel aad ku xirto waxaadna wax ka badali kartaa guddiga si uu isku mid u noqdo muuqaalka
isla wixii aad aragtay ma jiraan meelo lagu kaydiyo oo dheeri ah; sanduuqa furan + wbar iyo debian whezzy oo diyaar ah, xpad loogu talagalay stikers-ka, wax ka fudud intaas: Console jajja.
Tani ma khuseysaa Crunchbang Waldorf ??? Mise Openbox-ka waa in marka hore la beddelaa ???
Ku jawaab Markuz
Sidoo kale waa waxtar
Macluumaad xiiso leh laakiin su'aal ayaan qabaa. Qaabkani sidoo kale ma u shaqeyn doonaa Debian 8 Testing?
Ku soo jawaab byper
Hagaag, PPA-daasi waxay leedahay nooc kaliya oo ah Wheezy iyo Sid (waxaan filayaa).
Plank waa dekedda aan ugu jeclahay .. Fudud, dhakhso badanna waxay cuni kartaa xoogaa ilo ah few
Iyo Debian Jessie?
Jessie waa inaad kudartaa khadka soo socda
deb http://people.ubuntu.com/~ricotz/debian-plank side ugu weyn
debs lama saxeexin, laakiin si fiican ayey u shaqaysaa
elav uma baahnid inaad isticmaasho PPA-yada ubuntu waxay isticmaalaan qaahira dock waa meesha ugu fiican ee aan isku dayay haddii aan dhajin karo shaashadda oo aad arki lahayd sida ay u weyn tahay, laga yaabee inaad horayba u tijaabisay laakiin waad u habeysay max? hadaadan ku maaweelin naftaada wax ka bedelida sidaad u jeceshahay oo aad ugu raaxeysaneyso saameynta anigu waxba ugama bedelin wax walba oo qaahira ah marki horeba waa lama huraan wixii rakibid ah waxaan isticmaalayay debian side muddo dheer waligeyna ma aanan ka hinaasin PPAs mana seegin
qaahira ayaa kafiican oo kuma xirna ubuntu
Waxaan jeclaan lahaa inaan rakibo Plank Waxaan rabaa inaan ku tijaabiyo Crunchbang Waldorf, ma doonayo in qaahira ay ku xirto maaddaama ay tahay mid culus halkan Openbox oo ah aaladda 'distoor' yar yar waxay noqon doontaa in la raaco qorshahaas sidoo kale horeyba waan ugu isticmaalay KUbuntu aniga oo leh xfce ma doonayo inaan ka tago murugada isla, ma aha fikradda, laakiin marka lagu daro Repospos ayaa iiga tuuraya qalad markaan sameynayo cusbooneysiinta, maxay noqon kartaa?
Jawaab Rodrigo Antoine
SMTube: Browser yar yar ama biraawsar fiidiyoow ah oo loogu talagalay YouTube